Teepee miaraka amina garland - Moi Mili
Toby mahafinaritra ho an'ny ankizy.
Ny tranolain'i Moi Mili dia toerana tsara hahafinaritra sy fialam-boly ho an'ny ankizy rehetra. Ny teebehay miaraka amin'ny endrika mahazatra dia nozairina avy amin'ny lamba landy matevina. Ny manontolo dia voapaika amin'ny fanamboarana landy. Ireo maodelon'ity sokajy ity dia voatsindrona ampaara vita amin'ny pennants amin'ny loko eo amin'ny fidirana amin'ny tranolay. Ity haingo ity dia manome ny toetran'ny firenentsika.
Teepee dia manana varavarankely eo ankaviany. Ireo tapa-kazo dia nolanina sy nipetahanina, vita amin'ny kofehy matevina ny rafitra rehetra. Ny tsipika vita amin'ny hazo dia nafenina ao amin'ny tonelina natao tamin'ny vodiny. Ny tranolay mahafinaritra dia manana rindrina 5 sy toby pentagonal, mahatonga azy ireo ho matanjaka kokoa ary lehibe kokoa noho ny lay misy ny fototra efatra.
Izahay dia mamokatra any Polonina, indrindra avy amin'ny vokatra avy any poloney. Izahay dia mikarakara ny antsipiriany rehetra sy ny kalitaon'ny asa vita sy ny famokarana. Ny tipi dia mitondra manual ary fonony. Manasa anao izahay hanana fahafinaretana eto amin'ity tontolo ity.
"Ilay kintana volamena" lay lay lamba teepee
Tranolain'i Teepee "Miętowelove"
Tranolain'i Teepee ho an'ny ankizy "Sahan'i Lavender"